Iyo patent yeApple Watch inogona kuita kuti itetepete mune ramangwana | Ndinobva mac
Iyo patent yeApple Watch inogona kuita kuti iite mutete mune ramangwana
Chinhu chinowanzoitika patent yakanyoreswa neApple kujekesa kuti hazvireve kuti icho chinhu chatichaona muzvigadzirwa zvechiratidzo, chinongova chinhu chavainacho uye chavanozoshandisa kana kwete zvinoenderana nezvinhu zvakawanda. Mune ino kesi tiri kutaura nezvekudzora kukora kweApple Watch nekutenda kune izvo zvinoratidzwa mune iyi patent yakanyoreswa nevakomana kubva kuCupertino umo tambo yekurinda inoratidzwa iyo inokupa iwe mhinduro yekufungidzira ichisiya imwe nzvimbo mukati mewachi uye ichideredza saizi kana ukobvu.
Iyo yakanyoreswa patent inotaura zvakajeka kuti ndiwo mashandiro anoenda patambo yekutarisa ichipa zvinobata kana kudedera izvo zvatinogamuchira kana chiziviso chasvika, mune iyi nyaya patent inotaura zvakajeka kuti i "mashandiro akasungirirwa patambo ine mhinduro haptic" . Mune mamodheru aripo pane huwandu hwakanaka hwemabhande anoenderana asi iwo akawedzera kamera kana imwe mhando yeimwe "yekuwedzera" kune wachi. akakurumidza kutongwa kunze nekuda kwekushayikwa kwekunze kwekubatanidza chiteshi kana zvakafanana kunyangwe iine imwe yekuongororwa ipapo panosungwa mabhande.
Iyo Apple wachi ine saizi yakanaka kwazvo mumitsara yakajairika, asi kana ivo vaikwanisa kubva kuCupertino kudzikisa kukora kwayo pasina kurasikirwa nebhatiri kugona kana kudzikisira mashandiro ayo modhi yazvino yatove nayo, vashandisi vazhinji vangazvikoshesa. Uye zvakare, iyi yakanyoreswa patent yaizarura mikova kune izvi zvinogoneka zvishongo pamabhande, asi sezvatakambotaura pakutanga izvi zvinogona kungova imwezve Apple patent pasina kushandiswa muzvigadzirwa zvayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo patent yeApple Watch inogona kuita kuti iite mutete mune ramangwana
Tweetbot ine 50% dhisikaundi pamutengo wayo wenguva dzose
Isu takaedza iyo ichangobva kuvandudzwa Luminar app yeMac